Iroquois Log Cabin-Self-Care Bedding New Wifi
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguGorman
UGorman ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uGorman iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
SINEZINYO EZINYE iikhabhinethi ze-LOG KWESI siza! Sibonelela ngeekhabhinethi zelogi zokwenyani ezinebhafu encinci, ukufikelela echibini, ikhitshi eligcweleyo eline-microwave, ifriji, i-AC, isitovu kunye nomgodi womlilo wenkampu ngaphandle.
Nangona kunjalo, asiboneleli ngamashiti kunye neengubo okanye imiqamelo. Sibonelela, izicubu zendlu yangasese kunye namanzi ashushu!
Sinobusuku obu-4 obuncinci bokuhlala ngoJulayi nango-Agasti--BONA IREyithi ZETHU NGEVEKI
Sinezindlu zelog zokwenyani ezijonge iLake Poet entle encinci.
Ulwandle lwethu oluhle lokuqubha liLake Forest 1/4 yeemayile kude.
Imingxuma yeCampfire ngaphandle kwendlwana nganye.
Imizuzu eyi-6 ukusuka eLake George, imizuzu engama-30 ukusuka eSaratoga Race Track, imizuzu engama-20 ukusuka eGlens Falls kunye nayo yonke intshukumo.
Buyela e-PEACE AND QUIET emva kosuku oluxakekileyo
IPainted Pony Ranch yenye yeeRantshi zokuqala zeDude ezivele kwindawo ngoku ebizwa ngokuba yiNew York State "IDude Ranch Trail". Yifama eyimbali eyakhiwa ngo-1940 yaza yavulwa ngo-1942. Sifumaneka kwimizuzu emi-5 yokuhamba ukusuka eRodeo eyayikade iyinxalenye yepropathi yefama. Kumachibi amaninzi asekuhlaleni, iikhabhinethi zethu zijonge phezu kweLake lembongi kwaye siyakwazi ukufikelela kwiLake Forest apho iindwendwe zethu zinokuqubha--1/4 yeemayile kude--zisebenzisa indawo yethu yeendwendwe.
I-Dude Ranch Trail yaqhayisa ngeefama zeDude ezingama-22 ngeminyaka yee-1940 kunye neye-'50's. Ibiyinto encinci yoBomi baseNtshona kunye nama-cowboys okwenene avela kwihlabathi lonke ukuza kusebenza apha.
Nangona zimbalwa iirandi ezishiyekileyo, iPainted Pony ihlala intle. I-Hidden Valley Ranch, apho uGorman noPetros basebenza ebusheni babo, baye baduma ngenxa yokuthengwa nguPaul Newman noCharles R. Wood. Likhusi labantwana kunye neentsapho ezijongene nesifo esinganyangekiyo.
Uninzi lweefama ezindala zohlulwe zaza zathengiswa zibe ziingceba. Buza uGorman okanye uPeter kwaye siya kukuvuyela ukuxoxa ngee "Ghost Ranches" ezininzi oza kuqhuba ngazo ngaphandle kokuqaphela ngaphandle kokuba sikwazise.
I-Painted Pony Championship Rodeo yeyona inde ngokuqhubekayo eqhuba i-rodeo eMelika--yaqala ngo-1951. Sisiganeko esifunekayo apho usapho lonke lunokonwabela izithethe zaseMelika yaseNtshona, umdaniso ukuya kwiibhendi zelizwe kunye nomculo, kwaye ujabulele udumo lwabo oludumileyo. Bar-B-Que. Kwaye kufuneka uhambe imizuzu emi-5 kuphela!
Kwakhona, iLake George ikwimizuzu emi-6 kude, iSaratoga Springs yimizuzu engama-30 kwaye yonke iOutlet Shopping kunye neGlens Falls yimizuzu eli-15 kude.
Ke, hlala efama kwaye ujabulele uxolo kunye nokuzola kwehlathi emva kosuku lwakho oluxakekileyo nolunomdla.
UGorman uJohn Ruggiero
Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa ukuba uhlala ukhululekile